हजार रोटि चढाइने विश्वकै ठुलो त्रिशुल रहेको भैरब मन्दिरको दर्शन गरि सेयर गरौ। – Suchana Hub
हजार रोटि चढाइने विश्वकै ठुलो त्रिशुल रहेको भैरब मन्दिरको दर्शन गरि सेयर गरौ।
काठमाण्डौ । नेपालको पश्चिमाञ्चल विकास क्षेत्र अन्तर्गत लुम्बिनी अञ्चलमा पर्ने पाल्पा जिल्लामा अवस्थित भैरवस्थानको पहाडको टुप्पोमा अवस्थित काल भैरबको मन्दिर ले यश क्षेत्रलाई बिशेश पहिचान दिएको छ । यस मन्दिरमा १६ औ शताब्दीमा मणिमुकुन्द सेना द्वारा निर्माण गरिएको विश्वकै सबैभन्दा ठूलो मानिने सुनको त्रिशुल समेत रहेको छ ।
भैरव मन्दिरमा प्रायः सधैभरि नै मेला लागेता पनि विशेष गरी सोमबार, मंगलबार र शनिबारका दिन पूजा लाग्दछ। यहाँ मुठी, माना, र पाथिका गरि आफुले चाहे अनुरुपको रोट चढाउने चलन रहेको छ। विभिन्न चाडवाडहरूमा बोका, हाँस, परेवा, कुखुरा र पाडाहरूको बली यहाँको कालभैरवलाई दिइन्छ । भिडियो हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस् । subscribe मा क्लिक गरेपछि सँधै भिडियो हेर्न पाईनेछ ।
भैरबको मन्दिरमा त्रिशुल तथा रोटी चढाएर पूजा गर्न दर्शनार्थीहरुको ठूलो भीड लाग्ने गरेको छ । खासगरी दशैको बेला, मंसिर तथा बैशाखमा उल्लेख्य संख्यामा दर्शनार्थीहरु आउने गरेको स्थानीयले बताए । बि.सं.१४६५ मा पाल्पाका राजा मुकुन्द शेनले भैरवस्थलमा मन्दिर निर्माण गरेको किंबदन्ती रहेको छ ।
Tags: #ताजा समाचार, #भैरवस्थान
Previous सपनामा आफु रोएको देख्नुभयो? के हो त्यसको अर्थ ?
Next भगवान शिवलाई किन चढाइदैन तुलसी ? यस्तो छ कारण…